Ubunjineli beeNjineli kwiKholeji
Iingcali ezininzi: $ 10,000 + | Engavamile | AbaFundi beZizwe jikelele Ubunjineli | Sayensi | Abahlengikazi | Shishini
Ukuba ungumfundi wekholeji okanye umfundi oza kuba yikholejini enomdla wokubunjineli, unokufumana ilungelo lokufumana i-scholarship below. Kukho iireyinti ezininzi zeekholeji ngaphandle apho kubafundi abanomdla okwaneleyo ukuba balandele. Iibhaso zale ngqungquthela yezobunjineli zihlula kwixabiso ukusuka kwi-100 ukuya kwi-41,000 zamawaka. Ngomnye umfundi, uya kufumana iinqhagamshelo ngolwazi olongezelelweyo kwi-Cappex.com, iwebhusayithi ekhululekayo ehamba phambili enika iinkonzo zeklasi kunye neenkonzo zokufanisa. Unokufumana kwakhona abafundi abaninzi kwiCapepex.
Qaphela : Njengoko ucinga nge-scholarships, uza kufumana abaninzi abathi baphelelwe. Qhubeka ukhumbule, nangona kunjalo, ukuba ezininzi zezi zifundo zonyaka, ngoko ziya kuvela kwakhona ngonyaka ozayo. Uza kufumana abanye abamkela izicelo okwangoku.
I-AABE National Scholarships
Geber86 / Getty Izithombe
• Umvuzo: $ 3,000 - $ 5,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo mababe ngabafundi abancinci bezoshishino, ubunjineli, iteknoloji, izibalo, okanye isayensi yomzimba.
• Ilawulwa yi-American Association of Blacks in Energy
I-AACE International Competitive Scholarship Programme
• Umvuzo: uyahluka
• Inkcazo: Abafake izicelo kufuneka baphumelele kwizinga lobunjineli, ulawulo lokwakha, ukwakhiwa kwesakhiwo, isayensi yekhompyutheni, ishishini, ukuhlola ubuninzi, okanye iteknoloji yolwazi.
• Ulawulwa yi-AACE International
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baphumelele kwizinga lobunjineli.
• Ilawulwa yi-American Council of Engineering Companies
I-Adecco Engineering kunye nezoBugcisa bezoBugcisa bezoBugcisa bezoBomi
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka basebenze kwinqanaba lobunjineli.
• Kulawulwa yiZiko loLawulo lweeScholarship
IBhunga laseMelika leeMvavanyo ezizimeleyo
• Igalelo: $ 1,000 - $ 4,000
• Inkcazo: Abafake izicelo mabacwangcise umsebenzi wesayensi okanye ubunjineli.
• Kulawulwa yi-American Council yeeLebhanki ezizimeleyo
I-AREMA leMfundo leSchoolship Scholarship
• Umvuzo : $ 1,000 - $ 6,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babhalise kwiprojekthi yobunjineli okanye yobunjineli kwaye bavelise umdla kubunjineli.
• Kulawulwa yi-American Railway Engineering kunye neSondlo-ye-Way Association Education Foundation
Barry M. Goldwater Scholarship and Excellence kwiNkqubo yeMfundo
• Igalelo: $ 7,500
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baqhube umsebenzi wokufunda imathematika, isayensi yesayensi okanye ubunjineli.
• Kulawulwa nguBarry M. Goldwater Scholarship kunye noBugcisa kwiSiseko seMfundo
AbaNnyama kwiMicrosoft Scholarships
• Inkcazo: Abafaki-sicelo mababe ngabafundi base-Afrika baseMelika abaceba ukwenza idijithi yobunjineli, i-computer yesayensi, okanye ukhethe iinkqubo zoshishino.
• Ulawulwa yiNnyama kwiMicrosoft
I-BMW / SAE yobunjineli boBugcisa
• Inkcazo: Abafake izicelo mabacwangcise ubuninzi bebunjineli okanye intsimi enxulumene nesayensi.
• Kulawulwa nguMbutho weeNjini zeMoto
Buick Achievers Scholarship Programme
• Igalelo: $ 2,000 - $ 25,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babe ngundoqo kwikhosi yokufunda egxininisa ubunjineli / iteknoloji okanye ukhethe iindawo zokudibanisa kunye nezoshishino.
• Kulawulwa yiProgram yeBucick Achievers Scholarship Programme
• Inkcazo: Abafake izicelo kufuneka babhalise kwimveliso yezinto, ukuyila ukusebenzisana, ubunjineli, okanye inkqubo yesayensi yekhompyutha.
• Ulawulwa yiBudium
Ukuqaphela Ukwenza i-Future Scholarship
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baqhube umsebenzi kwisayensi, iteknoloji, ubunjineli okanye i-math field.
• Kulawulwa nguCognizant
I-Congressional Black Caucus Spouses I-General Mills Health Scholarship
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baphumelele kwizinga lezobisi, ubunjineli, iteknoloji, isondlo okanye enye intsimi enxulumene nempilo.
• Ulawulwa yiScottal Black Caucus Foundation
UDan Coiro Scholarship
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baqhube iqondo kwisayensi okanye ubunjineli.
• Ulawulwa yiCenageBrain
• Igalelo : $ 10,000 - $ 50,000
• Inkcazo: Abafake izicelo mabazalise umsebenzi obalulekileyo owela kwisigaba senzululwazi, iteknoloji, ubunjineli, izibalo, uncwadi, umculo, ifilosofi, okanye ngaphandle kwebhokisi.
• Kulawulwa yi-Davidson Institute for Talent Development
UDkt. Robert H. Goddard uScholarship
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baphumelele izifundo kwiinjineli okanye kwisayensi.
• Ulawulwa yiNational Space Club
UDkt Wes Eckenfelder Jr. Scholarship
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babe ngundoqo kwi-civil, chemicals, okanye yobunjineli bendalo, okanye enye yesayensi yezendalo.
• Kulawulwa nguBrown noCaldwell
I-EngineerGirl Essay Contest-
• Umvuzo: $ 100 - $ 500
• Inkcazo: Abafake izicelo kufuneka bangenise isicatshulwa kwisihloko esinikwe malunga nobunjineli njengoko kuhambelana neyeza zanamhlanje.
• Kulawulwa yiSizwe seSizwe soBunjineli
Ubunjineli bakho kwiMidlalo yeConstant
• Igalelo: $ 5,000 - $ 25,000
• Inkcazo: Abafake izicelo kufuneka bangenise ividiyo ehlola inkxaso yobunjineli ekhonza inhlalakahle yabantu kunye neemfuno zoluntu.
I-Award Umbrella Foundation I-Award Scholarship Award
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baphumelele kwisiganeko kwishishini, ubugcisa kunye nezesayensi, udaba lweendaba, ubulungisa bobugebengu, isayensi, iteknoloji, ubunjineli, imathematika, okanye ubugcisa obuhle.
• Kulawulwa yiStat Umbrella Foundation
UFred Luster, uSr. Education Scholarship
• Igalelo: $ 250
• Inkcazo: Abafake izicelo kufuneka babe ngabaphathi bekhemistry, ishishini okanye ubunjineli.
• Kulawulwa yi-American Health and Beauty Aids Institute
• Inkcazelo: Abafake izicelo kufuneka bamkelwe kwisikolo okanye kwiikholeji zobunjineli.
Iprogram yoLwazi lweSizwe loLwazi lweeNkcubeko ezinkulu
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babe ngundoqo kwisayensi, iteknoloji, ubunjineli, okanye izibalo.
• Ulawulwa yiNkonzo zeMali zoLwazi lweMali eziMkhulu
Iingcamango Ezinkulu kwiNkqubo ye-STEM / HENAAC
• Igalelo: $ 500 - $ 10,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo mababe ngabafundi beSpeyin ephezulu kwisayensi, iteknoloji, ubunjineli okanye izibalo.
• Ulawulwa yiMigudu Engundoqo kwi-STEM
• Igalelo: $ 500
• Inkcazo: Abafake izicelo kufuneka babe ngababuninzi bebunjineli, izibalo, isayensi, okanye inzululwazi njengencwadi.
• Elawulwa yiHeinlein Society
HSF / Procter & Gamble Scholarship Programme
• Inkcazo: Abafaki-sicelo mababe ngabafundi beSpeyin abaphishekela iqondo kwisayensi, iteknoloji, ubunjineli, izibalo, i-IT, okanye intsimi yezoshishino.
• Elawulwa yiSpanishi Scholarship Fund
Ibhanki yoPhuhliso lwe-Islam / ISNA Scholarship
• Inkcazo: Abafaki-sicelo mababe ngabafundi baseMoslim abaphishekela idijithi yobunjineli okanye enye insimu efunyenweyo yokufunda.
• Ukulawulwa nguMbutho wamaSulumane eNyakatho Melika
UMaureen L. noWoward Blitman, i-PE, iScholarship
• Inkcazo: Abafake izicelo mababe ngabafundi base-Afrika baseMerika, baseMerika, nabaseSpeyinya bamkelwe kwinkqubo yobunjineli.
• Ulawulwa yiNational Society of Engineers Engineers
Mioy Hynh Scholarship nguCengageBrain
• Inkcazo: Abafake izicelo kufuneka baphumelele kwizinga lesayensi, iteknoloji, ubunjineli, okanye imathematika.
• Ulawulwa yiCengage Learning
I-NOGLSTP Ukuphuma kwi-Scholarship
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babe besithandana, abesilisa abathandana nabasetyhini, abesilisa abaneentlobano zesini, i-transgender (LGBT) okanye amaqabane amaninzi kwisayensi, iteknoloji, ubunjineli, okanye imathematika.
• Ulawulwa yiNational Organisation of Gay neLesbian Scientific and Professions (NOGLSTP)
I-Odebrecht I-Award yoPhuhliso oluQhubekayo
• Igalelo: $ 5,000 - $ 20,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baqhube iqondo lobunjineli, izakhiwo, ukwakha nokwakhiwa kokwakha, okanye i-chemistry.
• Ulawulwa yi-Odebrecht Organisation
UPawulos no-Ellen Ruckes Scholarship
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babe ngabangaboniyo ngokusemthethweni kwaye banokwenza ubunjineli okanye ikhompyutheni, i-physics okanye yobomi bezesayensi.
• Ilawulwe yi-American Foundation yeZifama
I-SanDisk Scholars Fund
• Inkcazo: Abafake izicelo kufuneka baqhube umsebenzi wokubunjineli okanye isayensi yekhompyutheni.
• Kulawulwa yiSanDisk Corporation
• Igalelo: $ 25,000 - $ 41,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka baphumelele kwizinga lesayensi, iteknoloji, ubunjineli okanye izibalo.
• Kulawulwa yiSayensi, iMathematika noPhando ngoTshintsho
Umbutho weeNzululwazi zeeNzululwazi zeeNzululwazi zaseSpeyin
• Umvuzo: $ 1,000 - $ 3,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babe ngabafundi beSpeyin ephezulu kwisayensi, iteknoloji, ubunjineli, izibalo, okanye intsimi enxulumene nayo.
• Kulawulwa nguMbutho weeNjineli zeeNzululwazi zeSpeyin
Umbutho wabasebenzi beeNjineli zabasetyhini iiScholarships kubaFundi abaFundi
• Igalelo : $ 1,000 - $ 10,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo mababe ngabafazi abalungiselela umsebenzi wokubunjineli, ubugcisa bunjineli, okanye i-computer yesayensi.
• Kulawulwa nguMbutho weeNjineli zeNkwenkwezi
• Igalelo : $ 4,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babe ngamadoda aphishekela iqondo lobunjineli, umthetho, iyeza, okanye isayensi yezopolitiko.
• Kulawulwa yiClubs Boys & Girls Girls of Greater San Diego
I-UNCF / iMarck Undergraduate Research Scholarship Award
• Igalelo: $ 10,000 - $ 25,000
• Inkcazo: Abafaki-sicelo kufuneka babe ngabafundi base-Afrika nabama-Amerika abakhulu becandelo lobomi bezesayensi, isayensi, okanye ubunjineli.
• Kulawulwa yiNational Initiative Merck Science Initiative
U-Wayne V. Black Memorial Scholarship
• Inkcazo: Abafaki-zicelo kufuneka basebenze kwinqanaba lobunjineli, ubugcisa bezobunjineli, i-computer ye-computer, ngaphambili, umthetho wezesayensi, okanye iteknoloji yolwazi.
• Kulawulwa yiNxibelelwano yamandla kunye noMbane
Ihram Iingubo zeHajj - i-Muslim pilgrimage eMakkah (iMecca)